ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: သိဟ်ရာသီခရီးသည်
Touch Me Not August 9, 2009 at 12:58 AM
ဧရာဝတီသား August 9, 2009 at 2:27 AM
သိဟ်ရာသီ ခရီးသည်ကိုလာဖတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Leo ပဲခင်ဗျ။ ကြိုက်လို့ ကော်ပီကူးသွား ပါတယ် အစ်ကိုရေ။ ကျေးဇူးတင် ခင်မင်စွာဖြင့်
Unknown August 9, 2009 at 2:55 AM
မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာ သိဟ်ရာသီဖွားတွေရှိရင်လဲ ရေးပေးသွားကြပါဦးလို့.....။
သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဒီပိုစ်လေးကတော့ သိဟ်ရာသီဖွားတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ သိဟ်ရာသီခံစားမှု ပြခန်းလေးပါ။ မည်သူမဆိုဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
မိုးစက်အိမ် August 9, 2009 at 3:59 AM
အကိုရေ ကဗျာလေး လာပို.တဲ.အတွက်
ရောတကူးတက လုပ်ပေးတဲ. အတွက်ရော
ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ညီက
အကိုကို ပြောဖူးပါတယ် ညီကို မေဖွား ပါခင်ဗျ...
မေ၈ ပါ "TAURUS" ဖွားပါ ... ညီရေးတော.
အလိုဘဲရေးထားတာပါ ဒါပေမဲ. "Leo" လို.ဖြစ်
သွားတာပါ ... ဘာအမှားရှိလို.လည်းတော.မသိပါဘူး
အကိုလည်း မေဖွားလို.ညီက ထင်တာပါ ... ဘယ်လို
ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ အကို ကဗျာအကြောင်းလေးရော
ဗေဒင် အကြောင်းလေးတွေပါ ဖတ်ရတဲ. အပြင် ညီကိုပါ.
ခုလိုတလေးတစား အမှတ်ရပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါအကို
အမှားအယွင်းရှိရင်တော. ညီအပြစ်ဘဲ ဖြစ်မှာပါ :)
အနော် August 9, 2009 at 12:24 PM
ရှင်းလင်းပြထားတာနဲ့ ကဗျာလေးတွေက အရမ်းကောင်းတယ်နော်
ပျော်ရွှင်ပါစေ ခြင်္သေ့ကြီးနဲ့ ခြင်္သေ့သေးသေးလေးရေ
ဇော် August 9, 2009 at 12:54 PM
နောက်တစ်ခါ ကန်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာလုပ်ဦးဗျ။ ကိုချမ်းညီက ကန်ဆာနော်။ ဟဲဟဲ။ =P
mysterysnow August 9, 2009 at 12:58 PM
ကေသရာဇာခြသေ့င်္တွေရဲ့ ခရီးလေးကို သဘောကျပါတယ်။
ခြသေံင်္တွေက စာရေးဆရာတွေ များတယ်နော်...
mysterysnow August 9, 2009 at 1:03 PM
ညီမချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မကေကလဲ လီယိုပဲသိလား...
mysterysnow August 9, 2009 at 1:04 PM
လင်းကြယ်ဖြူ August 9, 2009 at 4:48 PM
သိဟ် ရာသီ ခရီးသည်
ဘယ်တော့မှ လမ်းမပျောက် ပါဘူး..
Angel Shaper August 9, 2009 at 8:40 PM
ကိုချမ်း ကိုချမ်း သမီးက Sagittarius နော်။ ဒီရာသီဖွားလဲ လုပ်ပါဦးဗျာ။
Angel Shaper August 9, 2009 at 8:52 PM
အလွန်လှသော အိမ်သစ်ဟာ ကိုချမ်းအိမ်လေးပါ။ မောင်ဝင်းကြည်ဘာတွေလုပ် နောက်ဖေး တကုတ်ကုတ်။
တကုတ်ကုတ်နဲ့ မောင်ဝင်းကြည် ဟင်းတွေချက်နေသည်။ ကျက်လာရင် ကိုရေချမ်း အမုန်းဆွဲ မတဲ့လား။
မောင်ဝင်းကြည့်ချက်သမျှ ဒိုင်ခံ တီးသတဲ့ဗျာ။။။။
၀ါးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးး
အိမ်သစ်လေး ကဗျာ လာစပ်တာဗျာ။
အလုပ်ပေးထားတာ မေ့ပြီး ကိုချမ်းအိမ်ဘာလို့ ဝင်မရတာလဲ စဉ်းစားမရတာ... ခုမှ အဖြေတွေ့ သဗျ။။။ အရမ်းလှနေတယ် ကိုချမ်းရေ.... ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
စိတ်၏ဖြေရာ August 10, 2009 at 1:32 PM
Waing August 10, 2009 at 10:39 PM
သိဟ်ရာသီအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတဲ့အတွက် ကိုချမ်းကိုလေးစားပါတယ်။
သိဟ်ရာသီဖွါး ဘလော့ဂါမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေနော်။
နွေဆူးလင်္ကာ August 11, 2009 at 8:41 AM
ကျွန်တော်လည်း မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်လေး တင်ထားပါတယ်။ ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်တောင် သိဟ်ရာသီဖွားမဟုတ်လိုက်တာ ခံစားသွားရတယ် ဟဲဟဲ။
သီဟသစ် August 11, 2009 at 11:11 AM
မြစ်ကျိုးအင်း August 11, 2009 at 11:16 AM
ကျွန်တော့်လို မေလဖွားအတွက်တော့ နောက်တနှစ်မှ သိခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့...။
နွေးနေခြည် August 16, 2009 at 8:38 AM
သိဟ်ရာသီဖွားဖြစ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ရာသီတူ အကိုအမ မောင်ညီမလေးတွေကို သိခွင့်ရလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
my birthday july 25